Guushu maahan safar, waa safar. - Zig Ziglar - xigasho Pedia
Noloshu waxay noqotaa mid xiiso leh maxaa yeelay dhammaanteen waxaan ku leennahay riyooyin iyo damacyo kala duwan oo aan ku daba jirno. Waxay na siisaa dhiirrigelin waxayna noo oggolaanaysaa inaan la kulanno xaalado kala duwan oo nolosha ah oo naga dhiga kuwa aan noqonno qof ahaan.
Xaqiiqdi waa inaan himilooyin dejino si aan u raacno dariiqa saxda ah ee aan ku gaarno xaqiijinta riyooyinkeena Laakiin waa in qofku fahmaa in aynaan joojinin ama aan xadidin nafteena mar haddii aan gaarno yoolkeenna. Waa inaan u furnaanaanaa si aan u baarno waxyaabo badan oo aan u qirsanno fursado badan oo horteena jira.
Waa inaan xasuusnaano in ku guuleysigu aysan la mid aheyn gaarista meel la gaaro. In kasta oo ay tahay inaan nolosha ku qanacsanaano, had iyo goor waa muhiim in dabka la sii wado - rabitaanka in wax badan la ogaado oo la baaro. Waa inaanu ka joojin nafteena inay noloshu waxbadan ka ogaato.
Haddii aan guuleysanno si aan u noqonno safar, markaa waxaan sii wadi doonnaa socodka. Tani waxay nolosheena ka dhigi doontaa mid hodan ah waxayna naga caawineysaa inaan ogaano waxyaabihii laga yaabo inay xumaadaan. Waxay nolosha ka dhigeysaa mid sii kobcisa maxaa yeelay waxay naga caawineysaa inaan helno aragti dheeraad ah, dad cusub, iyo waxay awood noo siisaa inaan wax baranno.
Waxay kaloo na siineysaa fursad aan wax ugu biirin karno bulshada si kasta oo aan awoodno. Haddii aan gacan ka geysan karno oo saameyn ku yeelan karno kuwa u baahan gargaaradeenna, markaa waxaan dhihi karnaa runtii waan guuleysanay. Mar labaad, tabarucani wuxuu sidoo kale leeyahay ikhtiyaar aan xadidneyn oo la fiiriyo.
Mid waa inuu had iyo jeer raadiyaa hab lagu helo fursado cusub iyo sii wad barashada iyo koritaanka. Ku haynta safarka barashada inuu sii socdo waa runtii guul.
Quote Quotes sawiro
Xigashooyinka guusha guusha caan ah
Xigashooyinka dhiirigelinta socdaalka
Xigashooyinka dhiiri-galka ah ee ku saabsan guusha
Xigashooyinka Ku Saabsan Socdaalka iyo Goobta
Xigashooyinka ku saabsan Guusha iyo Guul
Guusha Sawirada leh Quotes
Guulihii Safarka Guusha
Xigashooyinka Guusha iyo Hadallada
Tirooyinka Guusha ee Shaqada
Guusha xigashada sawirada
Ha u oggolaan khaladaadka iyo niyad jabyada xakamaynta ee hore ha ku hagto mustaqbalkaaga. - Zig Ziglar
Ha u oggolaan khaladaadka iyo niyad jabyada xakamaynta ee hore ha ku hagto mustaqbalkaaga. - Zig Ziglar Laxiriira…
Adduunyadan oo ay ka muuqato diidmo iyo dadka hareerahaaga ah oo ay ka buuxaan dhammaan noocyada fikradaha rajo xumada,…